शंकाको घेरमा टोखा हत्याकाण्ड : १० घण्टापछि मात्र किन गरियो प्रहरीलाई खबर ? केसी परिवारलाई पनि जानकारी दिइएन ||Rajyadainik||
शंकाको घेरमा टोखा हत्याकाण्ड : १० घण्टापछि मात्र किन गरियो प्रहरीलाई खबर ? केसी परिवारलाई पनि जानकारी दिइएन
08:43 am 01-10
काठमाडौं - पुस २६
बहिनी र ज्वाइँबीच पहिलेदेखि नै पारिवारिक विवाद हुने गरेको शर्मिलाले बताएकी छन् । उमेशका दाजु हिमेशले भाइबुहारीको हत्यामा तेस्रो पक्षको पनि संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरे । ‘सुदीक्षाले भाइको हत्या गरेर आत्महत्या गरिन् भन्ने पत्यार लाग्दैन, कतै आर्थिक कारणले त घटना घटाइएन भन्ने हाम्रो आशंका छ,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।